July 2020 - Achawlaymyar
သားလေး မိန်းမယူရင်နေဖို့ အိမ်တောင်ဝယ်ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့ မြင့်မြတ်….
July 31, 2020 by Achawlaymyar
သားလေး မိန်းမယူရင်နေဖို့ အိမ်တောင်ဝယ်ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့ မြင့်မြတ် မြင့်မြတ်က လက်ရှိမှာ ချစ်ရတဲ့ ဇနီးနဲ့ ဂျင်းကောင်ပေါက်စလေးနဲ့အတူ သာယာတဲ့အိမ်ထောင်ရေးကိုတည်ဆောက်ထားနိုင်ပြီး အေးချမ်းတဲ့ဘဝလေးမှာ အနုပညာအလုပ်တွေကိုအာရုံစိုက်ပြီး ပရိသတ်တွေအတွက် အလုပ်ကြိုးစားနေသူတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေ ဇယ်ဆက်သလိုရိုက်နေရတဲ့ မြင့်မြတ်က အလုပ်မှာအာရုံစိုက်သလို လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အနုပညာညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေနဲ့လည်း တည့်အောင်နေတတ်သူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ပျော်ပျော်နေတတ်သူတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့ မြင့်မြတ်ရဲ့ ချစ်ဇနီးလေးက ဒုတိယကိုယ်ဝန်ကိုလွယ်ထားရပြီဖြစ်လို့ မြင့်မြတ်တို့မိသားစုလေးက ပိုပြီးစည်စည်ကားကားနဲ့ နွေးထွေးတဲ့ အသိုက်အမြုံလေးဖြစ်လာတော့မှာပါ။မြင့်မြတ်က မကြာသေးမီက သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ယက်မှာ နောက်ထပ်ရင်သွေးလေးတစ်ယောက် ထပ်ရတော့မယ့် ခံစားချက်ကို ရင်ဖွင့်သွားပြီး သားလေးနောင်ရေးအတွက် စီစဉ်ထားတာကိုလည်း ပြောပြသွားခဲ့ပါတယ်။ မြင့်မြတ်က မကြာခင်မှာ ဘဝထဲဝင်ရောက်လာတော့မယ့် ဒုတိယမြောက်ရင်သွေးလေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး “surprise ပေ့ါနော်။ ပျော်တာပေ့ါ။ အဲ့လိုပဲပြောရမှာပေါ့။ အမှန်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်တော်တို့က နည်းနည်းခြားပြီးတော့မှ ယူချင်တာပေ့ါနော်။သုံးလေးနှစ်လောက်ပေါ့။ အဲ့လောက်မှ ခြားပြီးတော့ ယူမလို့။ ဒါပေမယ့် … Read more
“ရေ” ဆိုသည်မှာ အသက်ရှင်နေထိုင်မှုအတွက် အရေးကြီးဆုံးအရာဖြစ်ကြောင်းကို အားလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။ ကျန်းမာရေးအတွက် လုံလောက်သောရေပမာဏကို နေ့စဉ်သောက်ပေးသင့်သည်ကိုလည်း သိထားကြပါသည်။သို့သော် ရေသောက်သည့်အခါ မတ်တပ်ရပ်ပြီးရေသောက်ခြင်းသည် ကျန်းမာရေးအတွက် ဆိုးကျိုးများဖြစ်စေနိူင်ပါသည်။ထိုအချက်ကို အများစုသည် မသိရှိကြသောကြောင့် မည်ကဲ့သို့ဆိုးကျိုးများရှိသည်ကို ဆက်လက်ဖတ်ရှုကြည့်လိုက်ပါနော်။ ၁။ မတ်တပ်ရပ်ပြီးသောက်လိုက်ခြင်းသည် တောက်လျှောက်စီးဝင်သွားသောကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ကူညီပံ့ပိုးပေးသော ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများဆီသို့ ရောက်မသွားတော့ပါ။ထို့ကြောင့် အပြင်ထွက်ရမည့် အညစ်အကြေးများမှာလည်း ကျောက်ကပ်နှင့်ဆီးအိမ်ထဲတွင် သွားရောက်အနည်ထိုင်နေတတ်ကြပါသည်။ ၂။ မတ်တပ်ရပ်ပြီး ရေသောက်ခြင်းသည် သဘာဝစနစ်နဲ့ မကိုက်ညီသလို အာရုံကြောစနစ်များကိုလည်း လှုံ့ဆော်ပေးသည့်အတွက် အန္တရာယ်ဖြစ်စေပါသည်။ ရေ၏အာဟာရဓာတ်များသည် အလဟဿဖြစ်သွားပြီး ခန္ဓာကိုယ်အနေနဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုများ၊ ပူပင်ကြောင့်ကြမှုများကို ကြုံတွေ့ရပါသည်။ ၃။ မတ်တပ်ရပ်ပြီး ရေသောက်ခြင်းသည် ရေငတ်မပြေစေပါ။ တိုက်ရိုက်ဝင်သွားသော ရေများဆီမှ အာဟာရဓာတ်နှင့်ဗီတာမင်ဓာတ်များသည် အသည်းနှင့်အစာချေအစိတ်အပိုင်းများဆီသို့လည်း မရောက်နိူင်တော့ပါ။ ထို့အပြင် အဆုတ်၊ နှလုံးနှင့်အောက်ဆီဂျင်ရရှိမှုကိုပါ … Read more
ထီပေါကျရငျ ဘယျလိုထုတျရမလညျးဆိုတာ sharing လေး လုပျပေးခငျြပါတယျ
ထီပေါက်ရင် ဘယ်လိုထုတ်ရမလည်းဆိုတာ sharing လေး လုပ်ပေးချင်ပါတယ် ထီပေါက်ရင် ထီ ရုံးချုပ် ၃၇လမ်းမှာသွားထုတ်ရပါမယ် ဘာတွေထည့်သွားရမလည်းဆိုတော့ 1. အိမ်ထောင်စုစာရင်း မူရင်း နဲ့ မိတ္တူ 2. မှတ်ပုံတင်မူရင်း မိတ္တူ 3. ထီလက်မှတ် 4.ပတ်စပို့စ် ပုံ ၃ပုံ ( ၅သောင်းဆုဆိုရင်တော့ ၁ပုံဆိုရပါတယ်) အပေါ်ကအချက်အလက်များကိုယူသွားရပါမယ် ရုံးချုပ်ရောက်ရင် အပေါက်ဝမှာ အဝင်အထွက်စစ်ဆေးတဲ့ အန်တီ(သို့)ဦးလေးကို ထီသွားထုတ်မလို့ ပြောပြီး နာမည်ရယ် မှတ်ပုံတင်ရယ်ရေး လက်မှတ်ထိုးရပါမယ် ပြီးရင် ၃လွှာကို ဓါတ်လှေကား (သို့) ရိုးရိုးလှေကားက တတ်သွားပါ ဝင်ဝင်ချင်း ဓါတ်လှေကားဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာ ထီဆုငွေများထုတ်ယူရန်ဆိုပြီး ရေးထားတယ် အာ့မှာ ပေါက်တဲ့ ထီလက်မှတ်တွေကို ထုတ်ပေးရတယ် အာ့ ထီလက်မှတ်နောက်ကျော ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာ ဘက်လက်မနဲ့ လက်ဗွေနှိပ်ရပါတယ် … Read more
“မိန်းမဆိုတာ” မိန်းမတစ်ယောက်ကို မင်းအနေနဲ့ ဘာကိုပဲပေးပေး အဲဒါကိုပိုပြီး ကြီးကျယ်ခမ်းနားအောင် သူ လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ မင်းက သူ့ကို မျိုးဥပေးရင် သူက မင်းကို ချစ်စရာ ကောင်းတဲ့ ကလေး တစ်ယောက်ပေးလိမ့်မယ် ။ မင်းက သူ့ကို အိမ်လေးတစ်လုံးလောက် ပေးတဲ့အခါ သူကမင်းကို နွေးထွေးတဲ့ မိသားစု သိုက်မြုံလေးပေးပါလိမ့်မယ်။ မင်းက ချက်ပြုတ်စရာတွေများ ပေးလာတဲ့အခါ သူက အရသာပြည့်စုံတဲ့ ထမင်းပွဲလေး ပြန်ပေးပါလိမ့်မယ်။ မင်းကသာ အပြုံးလေး တစ်ပွင့်လောက် ပေးကြည့်လိုက်ပါ သူက သူ့နှလုံးသားတစ်ခုလုံးကိုပြန်ပေးပါလိမ့်အုံးမယ်။ တကယ့် သူတို့ရဲ့အာနိသင်ကသူတို့ရသွားတဲ့ အရာတွေကိုတိုးပွားများပြား စေတတ်သူတွေပါ။ Credit original writer Credit photo “မိနြးမဆိုတာ” မိနြးမတစယြောကကြို မငြးအနနေဲ့ ဘာကိုပဲပေးပေး အဲဒါကိုပိုပှီး ကှီးကယွခြမြးနားအောငြ သူ … Read more
အကျဉ်းထောင် ဝင်းထဲထိ ဝင်ပြီး ဆိုင်ကယ်ခိုးယူသွား….
အကျဉ်းထောင် ဝင်းထဲထိ ဝင်ပြီး ဆိုင်ကယ်ခိုးယူသွား ပေါင် ဇူလိုင် ၃၁ အကျဉ်းဦးစီးဌာန ကုန်ထုတ်စခန်း ဝင်းထဲတွင်နေထိုင်သည့် ဌာနဝန်ထမ်းတစ်ဦး၏ ဆိုင်ကယ်အား ဇူလိုင် ၃၀ ညပိုင်းက ဝင်ရောက်ခိုးယူသွားမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ပေါင်မြို့နယ် ဇင်းကျိုက်မြို့ ရှိ ဇင်းကျိုက် (အကျဉ်းဦးစီး)ကုန်ထုတ်စခန်း ဝင်းထဲ၌ ဝန်ထမ်းလိုင်းခန်းများရှိပြီး အဆိုပါလိုင်းခန်းတွင်နေထိုင်သည့် ဌာနဝန်ထမ်းတစ်ဦး၏CBR (ဆိုင်ကယ်အကြီး)အမျိုးအစားတစ်စီး ကို ဇူလိုင် ၃၀ ညတွင် ခိုးယူသွားခြင်းခံရခြင်းဖြစ်သည် credit – PaungDaily unicode အကဉျြးထောငျ ဝငျးထဲထိ ဝငျပွီး ဆိုငျကယျခိုးယူသှား ပေါငျ ဇူလိုငျ ၃၁ အကဉျြးဦးစီးဌာန ကုနျထုတျစခနျး ဝငျးထဲတှငျနထေိုငျသညျ့ ဌာနဝနျထမျးတဈဦး၏ ဆိုငျကယျအား ဇူလိုငျ ၃၀ ညပိုငျးက ဝငျရောကျခိုးယူသှားမှုဖွဈပှားခဲ့သညျ။ ပေါငျမွို့နယျ ဇငျးကြိုကျမွို့ ရှိ ဇငျးကြိုကျ … Read more
အွန်လိုင်းကြည့်ရှုသူအရမ်းများနေတဲ့ တောရွာက ကလေးငယ်ရဲ့ နှစ်ပါးသွားသီချင်းတီးခတ်မှု
ဒီဗွီယိုဖိုင်လေးဟာဆိုရင်တော့ ယခုတစ်လော အွန်လိုင်းမှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ တောရွာတစ်ရွာက ရှိတဲ့တူရိယာနဲ့ အကောင်းဆုံးတီခတ်နေတဲ့ ရွက်ပုံးသီးကလေးငယ်ပါ။ ဒီကလေးက နတ်မောက်မြို့နယ် ကုလားရှင် ကျေးရွာကလို့လည်းသိရပါတယ်။ သူ့မှာရှိတဲ့ အိုးစည် ဗုံလေးတွေ၊ ကလေးဆော့တဲ့ ဒရမ်လေး၊ ပြီးတော့ တော်ယုံလူ လုပ်တတ်ဖို့ တီးတတ်ဖို့မလွယ်တဲ့ အိုးနဲ့လုပ်တဲ့ အိုးဗုံကိုလည်း ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တီးခတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ သီချင်းကလည်း မြန်မာ့ဇာတ်သဘင်ရဲ့ နှစ်ပါးသွားတေးဖြစ်ပါတယ်တဲ့၊ နှစ်ပါးသွားတေးတီးလုံးနဲ့ အညီ အမှီလိုက်တီးနိုင်ဖို့ဆိုတာ လွယ်တာမှမဟုတ်တာဗျာ…တစ်ကယ့်ကို တောက်မည့် မီးခဲတစ်ရဲရဲဆိုသလိုပါဘဲ။ ဒီလို အနုပညာမြောက်ပီး ခက်ခဲတဲ့ သီချင်းကြီးတစ်ပုဒ်ကို ကလေးငယ်တစ်ယောက်က စည်းဝါးကျကျ တီးသွားတာဟာဆိုရင် တစ်ကယ့်ကို ချီးကျူးစရာကောင်းပါတယ်။ ပညာကလည်းမခေဘူး တကယ့် ဂီတပိုးလေးဗျ။ ဒီဗွီယိုလေးဟာဆိုရင်တော့ ကြည့်ရှု့သူ ကိုးသိန်းကျော်သွားပီဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာ့မျိုးဆက်သစ်တွေဟာ လူတော်တွေဆိုတာ ဒီဗွီယိုလေးကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မြေတောင်မြှောက်ပေးတာမရှိတာရယ် … Read more
ကိုယ့်နှလုံးသားကဆူးကိုတော့ သူများနှလုံးသားနဲ့ ဘယ်တော့မှမထွင်မိစေနဲ့
ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများ ဘဝမှာ ဆူးစူးတတ်ကြပါတယ်။ ဟိုးကလေးဘဝငယ်ငယ်လေးတည်းကစူးလာခဲ့တဲ့ ဆူးတွေ နောက်ဆုံး ဘဝနေဝင်ချိန်အထိ ဆူးတွေစူးနေကြတုန်းပေါ့။ ငယ်ငယ်ကဆူးစူးရင် ကျွန်တော်တို့ငိုမယ်။ ခနနေရင် တစ်စုံတစ် ယောက်က အဲ့ဒီဆူးလေးကို ပြန်ထုတ်ပေးလိုက်ရင်ကောင်းသွားမယ်။ ဆူးနှုတ်ရတာ လွယ်တယ်ပေါ့။ အဲ့ဒီလိုပဲ တစ်ဘဝလုံး မကျေနပ်မှုဆူးတွေ စူးလိုက်၊ လောဘဆူးတွေစူးလိုက်၊ ဒေါသဆူးတွေစူးလိုက် ဆူးချင်တာ စူး အချိန်နဲနဲ ဒဏ်ရာ အနာတရ နည်းနည်းနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ပြန်နှုတ်ပစ်ခဲ့ကြတယ်မလား။ ကျွန်တော်တို့ ရိုးရိုးဆူးလေးတွေကိုတော့ အနာခံပြီး အမြန်နှုတ်ပစ်ကြနိုင်ကြပေမယ့် နှလုံးသားကိုဆူးတဲ့ အချစ်ဆူး နာကျင်မှုဆူးတွေကိုတော့ လွယ်လွယ်နဲ့ မနှုတ်ပစ်နိုင်ကြဘူးမလား? အဲ့ဒီနှလုံးသားမှာ စူးနေတဲ့ဆူးတွေကို ပဲ တခါတလေ မြတ်မြတ်နိုးနိုး ဖွဖွရွရွ ပွေ့ဖက်ထားမိတယ်မဟုတ်လား? တခါတလေကျတော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ ကိုယ့်ရင်ထဲ အသဲထဲ နက်နက်နဲနဲ စူးနစ်ဝင်နေတဲ့ ဆူးလေးကို ထုတ်ပေးဖို့ … Read more
“အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝသော လက်ဖဝါးပြင်မှ ထူးခြား အမှတ်အသား (၉) မျိုး”
အလွန်ထူးဆန်းသော သဘာဝအင်အားတို့သည် လူတစ်ဦးချင်းစီအတွက် သီးသန့်ရှင်သန်လျှက်ရှိရာ ထိုအစွမ်းတို့၏ အံ့ဖွယ်ရာ သတ္တိထူးတို့က လက္ခဏာရှင်ကို စိုးမိုးလျှက်ရှိကြသည်။ ထို့စွမ်းအင်တို့၏ အမှတ်အသားကို လက်ဖဝါးပြင်တွင် သိပ္ပံနည်းကျ သုတေသနပြုရာတွင် အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝပြီး လက္ခဏာရှင်ကို ရာနှုံန်းပြည့် ကောင်းကျိုးဆိုးပြစ်ကိုပေးသော အထူးအမှတ်အသားများ ဖြစ်ပေါ်လာပေသည်။ ထိုအမှတ်အသားများစွာထဲမှာ အလွန်အတွေ့များပြီး အမှန်တစ်ကယ်လည်း လူတစ်ယောက်၏ ကောင်းကျိုးဆိုးပြစ်ကို ဖန်တီးသော လက်ဖဝါးပြင်မှာ ထူးခြားသော အမှတ်အသား (၉) မျိုးအကြောင်းကို စာရှည်မည်စိုးသဖြင့် အနှစ်ချုပ်တင်ပြလိုပါသည်။ ထူးခြားအမှတ်အသား (၉) မျိုးကတော့ – ၁။ အစက်ကလေးများ ၂။စက်ဝိုင်းများ ၃။ကျွန်းသဏ္ဍာန် ၄။လေးထောင့်အမှတ်အသား ၅။ သုံးထောင့်အမှတ်အသား ၆။ ကြက်ခြေအမှတ်အသား ၇။ခရင်းခွ ၈။ ရာဇမတ်ကွက်များ ၉။ ကြယ်များ စသည်တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ၁။အစက်ကလေးများ။ ။ … Read more
အစ်ကိုရှိတဲ့ မိန်းကလေးတွေမှာသာတွေ့ရမယ့် အားသာချက်များအကြောင်း….
မိန်းကလေးတွေမှာ အစ်ကို ရှိနေပြီ ဆိုရင်တော့ အဲ့မိန်းကလေးလောက် ကံကောင်းတဲ့ မိန်းကလေး ရှိတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ မိန်းကလေးဆိုတဲ့ သဘော သဘာဝအရ မိန်းကလေးတွေရဲ့အကြောင်းကို သိပြီးသား ဖြစ်နေမှာ ဖြစ်သလို အစ်ကို ရှိနေတဲ့အတွက် ယောင်္ကျားလေးတွေ အကြောင်းလည်း သိပြီးသား ဖြစ်သွား တတ်ကြ ပါတယ်။ ဒါတွေအပြင် အစ်ကှိုရှိတဲ့ သူတွေ ရတဲ့ အားသာချက်လေးတွေ အများကြီး ရှိနေ ပါတယ်။ (၁) သတ္တိရှိတယ် မိန်းကလေး သဘာဝကတော့ ပျော့ညံ့တဲ့ သဘော ရှိတတ်ပါတယ်။ အားငယ်တ တ်ကြ ပါတယ်။ အစ်ကိုရှိတဲ့ ကောင်မလေးတွေ ကတော့ တမူထူးခြား ပါတယ်။ အစ်ကိုတွေက အလိုလိုက် အချစ်ပိုသလို အားကိုးရတဲ့ အတွက် အားကိုးနဲ့ မိုက်တတ်တဲ့ … Read more
အသည်းခြောက် ၊ဆီးရောဂါ နှင့် ကျောက်ကပ်မကောင်းလျှင်…..
အသည်းခြောက် ၊ဆီးရောဂါ နှင့် ကျောက်ကပ်မကောင်းလျှင် မသိသူကျော်သွားသိသူဖေါ်စား တောက်တဲ့လက်ဝါးလိုခေါ်တဲ့ပရဆေးပင်လေး(အခေါ်လွဲနိုင်သည်)ကိုမြင်ဘူးကြမှာပါ ဒီအပင်လေးကို ပြောင်အောင်ဆေးကြောသန့်စင်ပြီး နုတ်နုတ်စင်း ရေနွေးခတ်သောက် သုံးခွက်တခွက်တင်ကြိုပြီးသောက်လည်းရတယ် ကျောက်ကပ်နဲ့ပါတ်သက်တဲ့ရောဂါအဆုတ် အသည်းခြောက် ဆီးရောဂါနှလုံးရောဂါရှိသူများ ပိုက်ဆံမကုန်ဘဲပျောက်ကင်းတဲ့ဆေးပင်လေးမျှဝေလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာဆေးစွမ်းကောင်းများ Unicode, အသညျးခွောကျ ၊ဆီးရောဂါ နှငျ့ ကြောကျကပျမကောငျးလြှငျ မသိသူကြျောသှားသိသူဖျေါစား တောကျတဲ့လကျဝါးလိုချေါတဲ့ပရဆေးပငျလေး(အချေါလှဲနိုငျသညျ)ကိုမွငျဘူးကွမှာပါ ဒီအပငျလေးကို ပွောငျအောငျဆေးကွောသနျ့စငျပွီး နုတျနုတျစငျး ရနှေေးခတျသောကျ သုံးခှကျတခှကျတငျကွိုပွီးသောကျလညျးရတယျ ကြောကျကပျနဲ့ပါတျသကျတဲ့ရောဂါအဆုတျ အသညျးခွောကျ ဆီးရောဂါနှလုံးရောဂါရှိသူမြား ပိုကျဆံမကုနျဘဲပြောကျကငျးတဲ့ဆေးပငျလေးမြှဝလေိုကျပါတယျ။ မွနျမာဆေးစှမျးကောငျးမြာ